‘मेचीनगरलाई फुटबलको हब बनाउँछौँ’ « Loktantrapost
‘मेचीनगरलाई फुटबलको हब बनाउँछौँ’
मौफसलकै सर्वाधिक राशीको पुरस्कार भएको मेची नेत्रालय गोल्डकप यहि मंसिर ६ गतेबाट १५ गतेसम्म झापाको काँकरभिट्टामा सुरु हुँदैछ । काँकरभिट्टा माविको खेल मैदानमा हुने प्रतियोगितामा १० वटा टिमको सहभागिता रहने छ । आठ लाख पुरस्कार राशी भएको उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम तयारीमा छ आयोजक काँकरभिट्टा फुटबल टे«्निङ सेन्टर । प्रतियोगिताको सेरोफेरोमा रहेर आयोजक क्लबका अध्यक्ष मिन बस्नेतसँग सहकर्मी देबु बानियाँले गरेको कुराकानी ः
अहिलेसम्म लगभग ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । मैदानको मर्मत गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ, स्टेज निर्माण, प्याराफिटको निर्माण र गेट निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । हामीसँग टिम स्र्पीट छ । टिममा रहेर सबैको सहकार्यमा काम भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रका लागि गङ्गालाल गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको टिमले रकम संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । अतिथि सत्कार, दर्शकको व्यवस्थापन तथा हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरुको सम्मानका लागि पनि विशेष व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ ।
प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भनेर मात्र नहुँदो रहेछ । यसका लागि आर्थिक पाटो नै महत्वपूर्ण रहेछ । यस प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खर्चमा करिब ६५ लाखको अनुमान गरिएको छ । जसले पुरस्कारदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन हुन्छ । अनि रह्यो खर्चको स्रोत । हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको नै यस क्षेत्रका खेलप्रेमी, उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, खेलाडी, किसान, मजदुर आदि हुन् । उहाँहरुले हामीलाई विश्वास गरेर यति ठूलो प्रतियोगिता गर्न सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँहरुले तन, मन,धन र वचनले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ । हामीलाई धन नभएर मन मात्र हुनेले पनि मन दिएर सहयोग गर्नु भएको छ । धन हुनेले धन दिनु भएको छ । सुरुका वर्षहरुमा हामीलाई प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न निकै कठिन परेको थियो । किन भने त्यसबेला हामीले यहाँका दाता महानुभावहरुको विश्वास जित्न सकेका थिएनौँ । तर अहिले हामी मन जित्न सफल भएका छौँ । हामी जे गरे पनि पारदर्शी रुपमा काम गर्छौँ भन्ने उहाँहरुमा छाप परेको छ । यस भन्दा अघिका प्रतियोगितामा जसरी सहयोग गर्नु भएको छ, अहिले पनि उहाँहरुले त्यसरी नै लागि परेर साथ दिनु भएको छ । त्यसैले पनि यस क्षेत्रका आम खेलप्रेमी महानुभावहरुले खुलेर सहयोग गर्नु भएको छ ।
यो प्रतियोगिता गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले यस क्लबको स्थापना गरेका थियौँ । तर खेलाडी उत्पादन गरेर मात्र नहुँदो रहेछ । उत्पादन खेलाडीहरुलाई खेल्ने अवसर नपाइरहेको अवस्थामा उनीहरुको खेल कौशललाई अघि बढाउनका लागि मात्र भए पनि हामीले प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ प्रतियोगिता सुरु गरेका हाँै । जुन निजरन्तर ३ वर्षदेखि चलिरहेको छ ।
झापाको गौरबको रुपमा हेिरएको यस प्रतियोगितामा हामीले राष्ट्रिय स्तरका ए डिभिजन खेलेका टिमलाई सहभागिता गराउने भएका र्छौँ । जसमा हाम्रो आयोजक काँकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर र पाहुना टोली भारत कलकताको सुभाषचन्द्र बोइज क्लव रहने छ भने ए डिभिजनमा रमपम झापा–११, अग्नी रुपन्देही–११ , मनाङ मस्र्याङ्दी क्लव, सशस्त्र प्रहरी बल, त्रिभुवन आर्मी क्लव, नेपाल पुलिस क्लव, हिमालयन शेर्पा क्लवको सहभागिता रहने छ ।
अर्काे कुरा भनेको मेचीनगर खेलकुदको उर्वरभूमि हो, यहाँबाट थुप्रै खेलाडीहरु उत्पादन भएका छन् । जसरी पहिले जुन रुपमा खेलाडीहरु उत्पादन भए त्यसरी नै अबका दिनमा पनि खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य दिलाएका छौँ । हामीसँगै ट्रेनिङ लिएका खमिरगिल्सन कन्दङ्वा र एञ्जल गुरुङले झापा ११ मा डेब्यु गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा समेत यस्तै खेलाडी उत्पादन गर्दै खेल जगतमा योगदान गर्ने हो । जसरी होस् यस क्षेत्रको पहिचानका लागि हामीले यो प्रतियोगितालाई निरन्तर गर्दै आएका छौँ ।
अघिल्लो वर्षको अनुभवलाई हेर्ने हो भने हामीले दर्शकलाई भने जस्तो सहज बनाउन सकेका थिएनौँ । सीमित प्याराफिटका कारण सबै दर्शकलाई प्याराफिटमा राखेर खेल हेर्ने अवसर सृजना हुन सकेन । त्यसैले यो वर्ष सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै दर्शक आँट्ने गरी प्याराफिटको व्यवस्था गरिने छ । हामीले ३० हजार दर्शक भित्र्याउने लक्ष्य लिएका छौँ । साथै दाताहरुका लागि बेग्लै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पत्रकारका लागि पनि इन्टरनेटको सुविधासहित मिडिया सेन्टरको तयारी गरिएको छ । खेल हेर्नका लागि प्रवेश गर्ने समयमा एउटै मात्र गेट भएका कारणले समस्या थियो भने यो वर्ष कम्तिमा ३ वटा गेट निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
– प्रतियोगिताको राशी त हरेक वर्ष दोब्बर हुँदै जादैँछ नि । के अर्काे वर्ष १६ लाख हुने सङ्केत हो ?
मैले अहिलै नै यति हो भनेर भन्न मिल्दैन । हाम्रो टिम छ । म एक्लैको निर्णयले हामी अहिलेसम्म यो अवस्थामा आएका पनि होइनौँ । टिममा बसेर गर्दै जाँदा कुन परिस्थिति बन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो । मैले अघि पनि भनेको छु कि हामीलाई यस क्षेत्रका आम खेलप्रेमीले माया गरेकै कारण यो सफलता प्राप्त गर्दै आएका हौँ । अब रह्यो रकमको कुरा । पछिल्लो समय फुटबल व्यवसायिक बन्दै गएको छ । फुटबल खेलेर पनि थुप्रै युवाहरुले आफ्नो जीविको पार्जन गरेका छन् । कम्तिमा पनि हामीले खेलको आयोजना गर्दै गर्दा यहाँ आउने टिमले फाइनलसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च बचाएर आफ्नो टिमलाई केही रकम बचाउन सकोस् भन्ने हो । जसरी खेलको विकास हुँदैछ, त्यसरी नै आर्थिक रुपमा पनि सक्षम बन्दै जानु पर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले अब अर्काे वर्ष दोब्बर राशी भन्ने भन्दा पनि यो भन्दा बढी भएरै जान्छ । तर यति नै हुन्छ भन्ने छैन । जसरी हुन्छ खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरेर जान्छौँ ।
– अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
अहिलेसम्म हामीलाई यस क्षेत्रका आम खेलप्रेमी दर्शकले माया, हौषला, प्रेरणा र उत्साह थपिदिनु भएको छ । हामीले पनि उहाँहरुले गर्नु भएको देनलाई कुनै कुठाराघात नगरी निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा काम गरेका छौँ । जसरी यस भन्दा अघिका प्रतियोगितामा साथ दिनु भएको छ, त्यसरी नै यो ६ गतेबाट हुने प्रतियोगितामा साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु । खेल हेर्न आइदिनु होला । माया गरिदिनु होला ।
मैले भन्नै पर्छ हामीलाई भरोसा गरेर मेची नेत्रालय, समाजसेवी नरेन्द्र मेचे, मेची बस व्यवसायी सङ्घ, काँकरभिट्टा भेट्रान क्लब, मेची भन्सार एजेन्ट सङ्घ, अठोट नेपाल, सहारा नेपाल, क्यासिना माजन, मेचीनगर नगरपालिका, जिल्ला खेलकुद विकास समितिले अत्यन्तै ठूलो साथ दिनु भएको छ । यसैगरी निरन्तर रुपमा हामीलाई हौषला र सहयोग गरेर जिल्ला फुटबल सङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष भगिरथ आले मामा र झापा जिल्लाका प्रशिक्षक दिपक काकीले साथ दिनु भएको छ । र, आम मेचीनगरबासीको साथ र सहयोग छ ।